ခရီးသြား , July 15, 2020
ဗန်းမော်-မန္တလေး ကားလမ်းမကြီး၊ ဧရာဝတီမြစ်ရေမြင့်တက်မှုကြောင့် ရေကျော်မှုဖြစ်ပွားနေ ၁၄.၇.၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ ဗန်းမော်မြို့နယ်၊ စင်းခန်းကျေးရွာနှင့် မြလယ်ကျေးရွာကြား၊ ဗန်းမော်-မန္တလေး ကားလမ်းမကြီး၊ မိုင်တိုင်အမှတ် (၂၆၀/၂၆၁)ကြားတွင် ဧရာဝတီမြစ်ရေမြင့်တက်မှုကြောင့် ကားလမ်းမကြီးပေါ် ရေကျော်မှုဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ ...
ခရီးသြား , July 14, 2020
နိုင်ငံတော်အရေးပေါ်ရိက္ခာ စားအုန်းဆီ တန်ချိန် (၁၄၃၆)ကို မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ဖြန့်ခွဲသိုလှောင်သွားမည် နိုင်ငံတော်အစိုးရက ဝယ်ယူသည့် နိုင်ငံတော်အရေးပေါ်ရိက္ခာ စားအုန်းဆီတန်ချိန် ၁၂၀၀၀(တစ်သာင်း နှစ်ထောင်)တန်ထဲမှ တန်ချိန် ၁၄၃၆(တစ်ထောင့်လေးရာသုံးဆယ့်ခြောက်)တန်ကို မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အတွင်း ဖြန့်ခွဲသိုလှောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနမှ...
ရာဇမဏိစူဠာကောင်းမှုတော်ဘုရာကြီး ဇူလိုင်(၁၅)ရက်နေ့တွင် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်မည်
ရာဇမဏိစူဠာကောင်းမှုတော်ဘုရာကြီး ဇူလိုင်(၁၅)ရက်နေ့တွင် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်မည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၊ စစ်ကိုင်းမြို့ရှိ ကောင်းမှုတော်ဘုရားကြီးကို လာမယ့် ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်နေ.မှာဘုရားဖူးများ ဝင်ရောက်ဖူးမြှော်နိုင်ဖို့ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေးတော့မယ်လို့ သိရပါတယ်။ COVID-19 ရောဂါကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအတွက် ၃လ ကျော်ခန်.ပိတ်ထားရာမှ...
ခရီးသြား , July 12, 2020
နိုင်ငံတကာလေကြောင်းလိုင်းများ ပြန်ဖွင့်ပြီး ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာထုတ်ပေးခြင်းကို ယခုနှစ် စက်တင်ဘာလနောက်ပိုင်းမှ သာမျှော်လင့်နိုင်မည်ဟု ဒုတိယ သမ္မတပြော ဒုတိယသမ္မတဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူက အမျိုးသားခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေး (၁/၂၀၂၀)မှာ အခုလိုပြောကြားခဲ့တာပါ။ နေပြည်တော် ဇူလိုင် ၇ အမျိုးသားခရီးသွားလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဗဟိုကော်မတီ (၁/၂၀၂၀) အစည်း...
( ၁၁-၇-၂၀၂၀ ) ရက်နေ. ရန်ကုန်၊မန္တလေး ရွှေဈေးနှုန်းများ
ခရီးသြား , July 11, 2020
( ၁၁-၇-၂၀၂၀ ) ရက်နေ. ရန်ကုန်၊မန္တလေး ရွှေဈေးနှုန်းများ တစ်ကျပ်သားရောင်းဈေးများဖြစ်ပါသည်။
🍤 #တရုတ်ပြည်ထဲကိုပြည်ပကတင်သွင်းတဲ့ ရေခဲရိုက်ပုဇွန်ကွန်တိန်နာတွေမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တွေ့တဲ့ကိစ္စ။ 🇨🇳 တရုတ်ပြည်ကို #အီကွေဒေါနိုင်ငံကနေတင်ပို့တဲ့ အအေးခဲထားတဲ့ပုဇွန်ကွန်တိန်နာအတွင်းနဲ့ အထုပ်တွေပေါ်မှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တွေ့ ရှိခဲ့ပါတယ်။ တရုတ်အာဏာပိုင်တွေက #အီကွေဒေါကုမ္ပဏီသုံးခုဆီကနေ အအေးခဲထားတဲ့ပုဇွန်တင်သွင်းကို ရပ်ဆိုင်းထားလိုက်ပါတယ်။ တရုတ်ပြည်ထဲသို့ ပြည်ပကတင်သွင်းတဲ့ အအေးခဲထားတဲ့အစားအစာတွေကနေ နမူနာယူစစ်ဆေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။...
စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာနများအား ‌စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ငယ်များဖြင့် ရှောင်တခင် စစ်ဆေးမည်
စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာနများအား ‌စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ငယ်များဖြင့် ရှောင်တခင် စစ်ဆေးမည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကပ်ရောဂါအဖြစ် ထုတ်ပြန်ထားသော Coronavirus Disease 2019(COVID-19) ရောဂါအား ကာကွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်ရန်အတွက် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးရှိ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာနများကို ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏...
အာဇာနည်နေ့မှာ ၅၀၀ တန်အသစ်ထွက်မယ် ငါးရာကျပ်တန် ပုံစံသစ်ငွေစက္ကူကို ၂၀၂၀ပြည့်နှစ် ဇူလိုင်လ ၁၉ (အာဇာနည်နေ့) တွင် စတင်ထုတ်ဝေမည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်က ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ပုံပါတဲ့ တစ်ထောင်ကျပ်တန်ကတော့ လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာထုတ်​​ပြီး စနေနေ့ဖြစ်နေလို့...
COVID – 19ရောဂါကာလ တိုက်ခန်းစျေးနှုန်းများ ကျဆင်းကာ မြေကွက် အရောင်း၀ယ်ဖြစ်လာ
ခရီးသြား , July 10, 2020
COVID – 19ရောဂါကာလ တိုက်ခန်းစျေးနှုန်းများ ကျဆင်းကာ မြေကွက် အရောင်း၀ယ်ဖြစ်လာ အိမ်ခြံမြေအရောင်း၀ယ်လုပ်ငန်းသည် ဇွန်လကစ၍ ပြန်လည်သက်၀င်နိုးကြားလာပြီး COVID – 19ရောဂါကြောင့် တိုက်ခန်းစျေးနှုန်းများ ကျဆင်းကာ မြေကွက်အရောင်းအ၀ယ်ဖြစ်လာကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ အိမ်ခြံမြေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအသင်းမှ သိရသည်။...
ကမ္ဘာမှာအရှားဆုံး မြန်မာပြည်ထွက် ပိန်းနိုက် (Painite)​ ကျောက်မျက်
ခရီးသြား , July 09, 2020
🔮#ကမ္ဘာမှာအရှားဆုံးကျောက်မျက်ရတနာဟာ မြန်မာပြည်ကထွက်တဲ့ ပိန်းနိုက် Painite ပါ။🔮🔬 2016 ခုနှစ်ကရေးခဲ့တာမို့ အချက်အလက် အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ်။ memory တက်လာတာတွေ့လို့ ပြန်ရှယ်လိုက်တာပါ။ ဘာကြောင့်အရှားဆုံးလဲဆိုရင် ၁၉၇၉ အထိ တကမ္ဘာလုံးမှာ ၂ လုံးပဲရှိပါသတဲ့။ အခုအထိ...